Håkan Larsson /”ore Guryaha”: dukumentiyada been ah si ay laanta socdaalku, diisnaan F-tax iyo magaca shirkada cusub | Holmbygden.se
Waxaa hadda isku diyaarineysa feverishly si aad u hesho wakhti kasta si ay u helaan qaxootiga ee skandalhus Stendahls. Iyada oo sii kordhaya fadeexad iyo wax isdaba marin ay sii wadi doonto on mulkiilaha cusub Håkan Larsson ka Orebro, hadda iskaashi la wakiilada Stendahs. Ka dib markii diidmo of xiriir la Johan Stendahl in shaaca ka qaaday Swedish Television News Västernorrland, waxaa ku caddahay hadda dhowr shaki cusub:
shahaadooyin been ah in codsiyo u diray inay Migrationsverket.
Mar kale, magaca isbedel lahaanshaha.
Diisnaan F-cashuurta shirkadaha Håkan Larsson.
Been ku saabsan qaadashada xiriir la kooxda ciyaaraha maxalliga ah.
Aan qorsheyneysa fasax ogolaansho / dhismaha hoyga doonka.
codsiyada shahaado been abuur ah si ay laanta socdaalku
Håkan Larsson iyo Johan Stendahl qareen taliye sharci Michael adag gudbiyey shahaadada hawo been ah oo guryaha i Anundgård in dalab ay u laanta socdaalka si aad u hesho ansixinta. kontaroolada hawo ayaa ka yimid shirkad aan canshuurta F iyo oo aan aqoonsi si loo baaro. guryaha Accommodation walaacsan sidoo kale la xaqiijin kartaa in kormeere wax marna xitaa ku jiray guri ay lagu eedeeyay kormeera hab-ka.
Michael adag wuxuu u ekaa Stendahl sida ayaa sidoo kale 2013 Goortii makhribkii ka dibna soo gudbin dokumentiyada been ah dhismayaasha dab ilaalinta si Migrationsverket. Waxa ay ahayd sida Samatabbixinta Medelpad ka dibna arrin iska cad in been.
Mar kale, magaca isbedel lahaanshaha – ma “ore Guryaha”
Just in waqtigii iibinta ee hoy magangelyo 2013 biiro “Stendahl skandalhus” milkiilaha cusub ee warqadda “kirada” shirkadaha – Aros Energy caddayn leedahay yiqiin ah ee Johan Stendahl. Sidoo kale, waxayna ahayd wakhtiga qabowga la soo dhaafay markii ay isbarteen kale oo Stendahl, Håkan Larsson iibsaday guryaha. Håkan Larsson qaaday, si kastaba ha ahaatee, halka caddayn Aros Energy wakiil sharci Johan Stendahls agaasimaha kaliya.
Haddaba baxshay, si kastaba ha ahaatee, ka Håkan Larsson Bilkonsult AB öre Fastigheter AB. Haddii sababta waa in xidhiidhada Håkan Larssons in Stendahl qaawiyey cadda.
canshuurta diisnaan F
Ka dib markii tiro ka mid ah taariikhda credit, deymaha iyo la'aanta la xisaabtanka ayaa haatan Skatteverket keenay F-canshuurta shirkadda Håkan Larsson caddayn Aros Energy. Inkasta oo ay tani tahay qareen Johan Stendahls Michael adag ku fadhiya Guddiga.
Tdhagaxayga weyn det, dhammaan diidmada hore Adeegga Socdaalka iyo xidhiidhada si Johan Stendahl, eed Swedish State rubuc ka mid ah bilyan oo a, ka Orebro heli Håkan Larsson Bilkonsult saxiixo heshiis la Hey'adda laanta socdaalka iyo guryaha fadeexadii hoy magangelyo furan.
Been ku saabsan qaadashada xiriir la kooxda ciyaaraha maxalliga ah
Marka Håkan Larsson ku tilmaami lahayd xididdadiisa Holm, uu ku qoray in ay xiriir la sameysay naadiyada ciyaaraha maxalliga ah. Tan waxaa burinaya Holm Sportklubb, markii mid ka mid ahaa la xiriiray ku saabsan hoyga doonka kasta. Nor ayaa macluumaad kasta oo lagu gaadhsiiyo si ay dadka tuuladu ama warbixin abaabulay.
Haddii aan qorshe ogolaansho / ogolaanshaha dhismaha
Waxay leedahay ma ogolaanshaha dhismaha, waayo, waxyaalihii ay hoy magangelyo hantida. Sida caadiga ah loo baahan yahay ogolaansho qorsheynta ama codsiga dhismaha at beddelka isticmaalka dhismaha ah, in uu yahay, marka aad u tagto ka mid ah hawlaha kale ku.
Hoyga qaxootiga ay wada nool yihiin dadka kale iyagu ma ay yaqaaniin la kulmi doonaa shuruudaha Shuruucda Dhismaha for hawlaha.